10 Ciyaaryahan Oo Leicester Ah Oo Fashiliyey Chelsea Iyo Khadkii Tabobare Conte
HomeWararka Maanta10 Ciyaaryahan Oo Leicester Ah Oo Fashiliyey Chelsea Iyo Khadkii Tabobare Conte
Toban laacib oo Leicester ah ayaa wacdaro ku dhigay dhibicna kala hadhay kooxda kaalinta saddexaad ee Chelsea, iyadoo waliba xataa ay xaq u lahaayeen inay saddexda dhibcoodba kala soo huleelaan garoonka Stamford Bridge.
Naadiga lagu naanayso Dacawooyinka ayaa guud ahaanba maamulka ciyaarta siday doonaan isaga maamulanayay, fursadaha ugu fiicana abuuray, laakiin waxa qaab ciyaareedkoodii kala dhantaalay casaankii lagaga saaray difaacyahan Ben Chilwell wax yar uun kadib isu soo noqodkii qaybta labaad.
Il naxariiseed ayuu ka waayay garsoore Mike Jones daqiiqadii 68 aad markaas uu dhulka dhigay Victor Moses, iyadoo uu wax yar kahor uun xanaaqadeeyey Willian.
Kooxda tabobare Claude Puel ayaa laba goor qarka u saarantay inay dhaliyaan goolal, iyadoo uu labada fursadoodba helay Jamie Vardy, halka fursadii ugu khatarsanayd ee kalena ay ahayd madaxii uu Wilfred Ndidi ku ganay shabaqa, balse uu sida jirjiroolaha isaga saaray Thibaut Courtois.
Chelsea waxay isku dayaysay inay baasas gaagaaban goolka ku tagto. Cesc Fabregas ayaana laba kubaddood oo khatar u muuqday ganay – kuwaas oo uu ku tijaabiyey goolwade Kasper Schmeichel – daqiiqado ka hor dhamaadkii, goolwadaha reer Denmark wuxuu dibada dhigay laag xor ah oo uu ganay Marcos Alonso.
Dhar buluuglaydu waxay hadda dhibcaha kala siman yihiin kooxda kaalinta labaad ee Manchester United, oo Iyadu Isniinta ciyaaraysa.
Halka Leicester ay 31 dhibcood ku fadhido kuna negaatay kaalinteedii siddeedaad.